निशान न्युज कार्तिक १३, 2077
फिलिपिन्समा लडाकु भालेको आक्रमणबाट एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ । अवैधरुपमा भाले जुधाइ भइरहेको सूचनाका आधारमा छापा हान्न पुगेको प्रहरी टोलीमाथि भालेले आक्रमण गर्दा फिलिपिन्समा नगर प्रहरी प्रमुखको मृत्यु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार समार प्रान्तमा भीडभाडले कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै भाले जुधाइ रोक्नका लागि प्रहरीले छापा मारेको थियो । छापा मार्ने क्रममा भालेले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
नगर प्रहरी प्रमुख क्रिष्टियन बोलोकको भाले समाप्ने क्रममा भालेको आक्रमणबाट मृत्यु भएको फिलिपिन्सका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गभर्नर एड्विन ओङचुआनले भालेको खुट्टामा ब्लेड लगाइएको र भालेले निरन्तर आक्रमण गर्दा प्रहरी प्रमुखको मृत्यु भएको जनाएका छन् ।
भालेको आक्रमणबाट खुट्टाका नशा काटिएको र अत्यधिक रगत बगेकाले मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रहरीले घटनापछि तीनजनालाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । घटनास्थलबाट प्रहरीले ७ वटा कुखुरा बरामद गरेको छ ।
सरकारले भालेको आक्रमणबाट मृत्यु भएका प्रहरी प्रमुखको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको छ । फिलिपिन्समा भाले जुधाइ चर्चित खेल हो । लाइसेन्स लिएर खेलाउन पाइने भए पनि अहिले कोरोना संक्रमणले प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
हरेक श्रीमानले जान्नै पर्ने यी कुरा, जसले आफ्नो भविष्य सुन्दर बन्छ !
म तपाइँलाई मेरो लागि जुनतारा टिपेर ल्याइदिनु भन्दिन् । तर जब बाहिरबाट घर आउनुहुन्छ, साथमा एक मुस्...
स्थानीय र जीव नै डराउने गरी जब यसरी नदीमा रगत बग्न थाल्यो...
काठमाडौं । रुसको एक नदीको पानीको रंग अचानक रगत जस्तो रातो भएपछि स्थानीयहरु आश्चर्यसंगै त्रसित भएक...
यी महिला, जो ५६ वर्षमा ११ औं पटक विवाह गर्ने रहर अझैं कायमै
विवाह गर्नेका लागि हरेक मानिस योग्य जीवनसाथीको खोजी गर्दछन् । उसैका साथ पुरै जीवन बिताउने सङ्कल्प...
अनौठो कुकुर, जुन हरियो रंगमै यसरी जन्मियो !
इटली । इटलीमायो वर्ष पहिलेभन्दा धेरै अनौठा घटनाहरू भए । इटलीका एक कृषक क्रिस्टियन मालोस्सीले त्यस...
यस्तो पनि ! १४० रुपैयाँमा घर किन्न पाइन्छ
आफ्नै स्वामित्वको राम्रो घर होस भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ । तर सबैका चाहना पुरा हुन सक्दैन । किनकी...
फिलिपिन्समा लडाकु भालेको आक्रमणबाट एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ । अवैधरुपमा भाले जुधाइ भइरहे...